मलाई सन्चो छैन म बैठकबाट निस्किए – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
मलाई सन्चो छैन म बैठकबाट निस्किए
प्रकासित : ३० जेष्ठ २०७७, शुक्रबार
३० जेठ, काठमाण्डौं । हालै मात्र गठन भएको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण भइ बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भित्र बिरोध र असन्तुष्टिका आवाज निस्केका छन् । जेठ १५ गते निर्वाचन आयोगमा ५१ सदस्यी कार्यसमितिसहित दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि पार्टीमा चरम असन्तुष्टि देखिएको हो ।
असन्तुष्टिका आवाज बाहिर आएपछि जसपा नेपालको पदाधिकारीको बैठक आज बसेको थियो । हिजो बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा तत्कालिन राजपा नेपालका अधिकांश नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएको विषयमा छलफल भएको
थियो । पार्टी दार्ताका लागि तयार पारिएको कार्य समितिमा त्रुटी भएको पनि पदाधिकारी बैठकले निष्कर्ष निकालेको
संघीय परिषद्को अध्यक्षमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई नराखेको कारण पनि जनतामा नराम्रो सन्देश गएको समाजवादी पार्टीको ठहर छ । महन्थ ठाकुरकै कारणले संघीय परिषद्का अध्यक्ष स्वीकार गरिसकेका डा. बाबुराम भट्टराई वरिष्ठ नेतामा बस्नुपरेको पार्टीको बुझाइ छ । त्यसलाई पनि सच्याउनुपर्ने ती पार्टीका नेताहरुको माग गरेका छन् ।
महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले राजपा नेपालको तर्फबाट कार्यसमितिमा आ–आफ्नै निकट मान्छेहरुको नाम राखेका
छन् । त्यसको आलोचना पनि पदाधिकारी बैठकमा भएको स्रोतले बताएको छ ।